Manararaotra ny fanovana ny fitsipiky ny FIFA i Maraoka - teles relay
Mahazo tombony i Maraoka amin'ny fanovana ny governemanta FIFA
Avy hatrany dia nanararaotra ny fanovana nataon'ny FIFA vao haingana ny mpanazatra maraokana Vahid Halilhodzic mba hampidirana an'i Munir El Haddadi amin'ny ekipany farany.
Ny lalàna taloha dia nanakana ny Sevilla 25 taona tsy handroso hilalao ho an'ny Atlas Lions satria nahazo ny hazakazaka fifaninanana ho an'i Espana izy.
Saingy, nandritra ny fivoriambe fanao isan-taona nataon'ny FIFA tamin'ny volana lasa, novaina ny lalàna, taorian'ny tolo-kevitra avy amin'ny federasiona maraokana baolina kitra.
Afaka mifamadika izao ny mpilalao raha tsy nilalao lalao mihoatra ny telo amin'ny ambaratonga ambony izy ireo, miaraka amin'ny fisehoana rehetra alohan'ny faha-21 taonan'ny mpilalao.
Ny fisehoana amin'ny lalao famaranana amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany na ny kaontinantaly kaontinantaly toa ny fiadiana ny amboaran'ny firenena Africa dia mandrara ny fanovana ny fahazoana mandray anjara, fa ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana mendrika dia tsy.
"Niresaka tamin'i Munir aho nandritra ny enim-bolana ary nilaza izy fa te hilalao ho an'i Maroc," hoy i Halilhodzic rehefa nanambara ny ekipany.
"Nohararaotiko io vanim-potoana fanidiana io mba hijerena, hamakafaka ary hahafantarana ireo mpilalao ilaiko toa an'i Munir sy Ayman (Barkook ary mpilalao tanora alemà teo aloha). Ireo no mpilalao ilain'ny ekipa nasionaly.
“Ity olana zom-pirenena roa ity dia misy any amin'ny firenena maro, izay tokony hisafidianan'ireo mpilalao dieny mbola kely.
“Ny tena zava-dehibe dia tsy tokony ho ilay olona manery ny mpilalao hanova ny fanapaha-keviny aho.
“Eto izy ireo satria mifamatotra amin'ny firenena niaviany. Fanapahan-kevitr'izy ireo izany nefa tsy misy tsindry.
“Marokanina toy ny Maraokana rehetra izy ireo. Matotra izy ireo ary te ho eto ary hanatratra zavatra ho an'ny fireneny ”.
Maro ny fisakaizanan'i Maraoka nilahatra ho an'ny fialan-tsasatra iraisam-pirenena manaraka, voalohany nifanandrina tamin'i Senegal tamin'ny 9 Oktobra sy ny DR Congo efatra andro taty aoriana.
Ireo lalao roa ireo dia hatao ao ambadiky ny varavarana mihidy ao Rabat rehefa miomana ny lalao manasa-dalana ny fiadiana ny amboara afrikanina afrikanina ny volana novambra hiadiana amin'ny Repoblika afrikanina.
Nanampy an'i Sevilla i Munir El Haddadi nandresy ny ligin'i Europa tamin'ny taona 2020
Ny fampiakarana raharaha dia fotoana faharoa ho an'ny mpilalao Barcelona teo aloha hametraka ny tenany ho iraisam-pirenena, izay ninoany fa nanjavona rehefa nolavin'ny Fifa sy ny Fitsarana momba ny fanatanjahantena (raharaha) ny fangatahany hilalao ny Maraoka.
Tsy navela hanakalo ny firaisankina izy satria tamin'ny taona 19 dia niseho iray fotsiny ho an'i Espana izy, tamin'ny lalao fifaninanana Tompondakan'i Eraopa nifanandrinana tamin'i Makedonia tamin'ny septambra 2014, fony izy niditra ho mpisolo toerana ary nilalao latsaky ny 15 minitra.
Ny fitsipika teo aloha dia namela ny mpilalao hifanakalo ny fireneny raha toa ka nilalao tamin'ny lalao malala sy tsy fifaninanana izy ireo, na dia manana zom-pirenena roa aza izy ireo.
El Haddadi, izay niantso ny raharaha Cas miaraka amin'ny federasiona maraokana baolina kitra, dia niantso fangatahana fanapahan-kevitra haingana amin'ny fanantenana hilalao ho an'ny afrikanina avaratra amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny volana ambony any Russia.
Teraka tany Espana izy ary manan-dray Marokana ary nanomboka ny asany tany amin'ny Akademia Tanora Tanora malaza izay toerana nanaovany ny laharam-pahamehana.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/sport/africa/54369797
Andron'ny olona antitra: ny minisitry ny raharaham-pirenena dia manoro ny fahamalinana
Ho lasa ray i Stromae: bevohoka i Coralie vadiny - Video